सातामा तीन दिन बढेको बजारमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य रू. २१ खर्ब १८ अर्ब ८० करोड १० लाख पुगेको छ । सातामा कुल बजार पूँजीकरण रकममा रू.२५ अर्ब ६५ करोड २० लाखले बृद्धि भएको हो । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन कुल बजार पूँजीकरण रकम रू. २० खर्ब ९३ अर्ब १४ करोड ९० लाख थियो ।